Barattoota Yunvarsitiilee Naannoo Amaaraa irraa baqatanii dhufan keessaa muraasni yeroo ammaa Finfinnee - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBarattoota Yunvarsitiilee Naannoo Amaaraa irraa baqatanii dhufan keessaa muraasni yeroo ammaa Finfinnee
Barattoota Yunvarsitiilee Naannoo Amaaraa irraa baqatanii dhufan keessaa muraasni yeroo ammaa Finfinnee Dirree Masqalaa (Masqal Addabaabay) jiru.
Haa tumsinu. Qooda lammummaa haa baanu.”Kaleessa Ambootti hidhamnee turre balleessaa tokko malee, amma immoo akkanaan baayyee rakkachaa jirra Finfinnee keessatti oliif gadii joorreetoo …”
Samson Soboka Galata
Carraan daa’ima sabiyyii miilli irraa cite kanaa garaa nama guba. Garuu suuraa daa’ima miilli murame kanaa si’a tokkillii mil’attanii hindhiisinaa; hubadhaa ilaalaa, irra deddeebi’aa xiinxalaa. Maarree isa kan Abiyyis mil’achuu hindagatinaa. Miilla mucaa xobbee kanaa waa’ee qabsoo Oromoo bira qabaa ilaalaa, kanaan qabaatii rakkoo barattoonni Oromoo keessa jiran, gidiraa Gujii fi Wallaggaa yaadadhaa. Oromiyaa waan buufadha jettee dargaggoota ofii gabbartee karaa ilaalaa hafte yaadadhaa. Gaafa guduunfitan bakka qabsoon keenya ga’e, bifti inni qabatee jirus maal akka ta’e ofgaafadhaa. Qabsoon Oromoon qabsaa’e Oromiyaaf maal buuse jedhaa ‘conscience’ keessaniif amanamaa sirriitti of qoraa. Namni hedduun bakka kaleessaatti hafne wayta jedhu dhaga’ama. Ani garuu bara itti daa’imni kichuun akkasii miilla muramte yaadee arguu hindandeenye. Qabsoon Oromoo Nafxanyaaf aduu baasee Oromiyaatti dukkaneesse. Bakka itti dogongorri uumame ofgaafannee socho’uun har’a malee bor miti. Hattuu firii qabsoo Oromoo ariinee aangoo irraa hindarbinu taanaan carraan Oromoo fi Oromiyaa eeggatu isa durii irraa dachaa hammaataa ta’a. #Abiy_Must_Go
Baga Dhugaa Jirtuu Nurraa Itti Himte : Piroofessar Merera Gudina
Abo Lemma is defence minister of Ethiopia and politician in team of oromo.
Abyi group has been called team lemma until recent time but now they are in different direction of the politics.
Lemma has been opposing the new party of EPRDF following this Dr Abyi is not in good term with him.
OROMOOF qabsoofta, garuu immoo oromomaan hidhamta yookinis ajjeefamta.
QEERROOF QARREEN Magaalaa BAALEE ROOBEEF Magaalaa DODOLAA , gaafa aggaamiin ajjeechaa obboo jawaar Mohammad irratti adeemsiifame mormuun hiriiraa isintuu qindeessee jechuun guyyaa guyyaan hidhaatti guuramaa Kan jiraniidha.
Poolisiin oromiyaa Hardhallee xiyyeefannoon isaanii uummata oromoo oduu sobaatiin dararuu qofa ta’eetuma itti fufee jira.
Gocha diinnummaa Saba irratti hojjachuun Ittii gaafatamuummaa jalaa warra hin baane
Maqaa isaanii ol baasnee saaxiluun itti fufa
Imimmaan baratoota OROMOO naannoo amhaaraatti barnootaaf bobba’an.
Ergaa Warra Amboo
ኦሮሞ የሚባል ብሄር የለም የጃዋር ሀገር ጉድ ያስባለ አዲስ ንግግር! | Ethiopia | Jawar Mohammed
Namoota dhunfaa qeequus ta’e deeggaruu irratti osoon xiyyeefachuu baadhe natti tola. Garuu barruun Taayye kun deebi barbaaddi. Taayyeen kaleessa gaaffiif deebii TV naannoo Amaara waliin godhe irratti “finxaaleeyyii keenyatu nu rakkise” waan jedhu dubbatee ture. Torban kana Yohannes Buayaalew Ameerikaatti Jawaar seeratti dhiheesina jedhee dhaadachaa ture. Firuummaan Taayyee fi Yohaanis akka malee jabaateerti. Mee daran isiniif hajabaattu. Amma kan har’a inni barresseefan deebi kenna.
Jawar aggaamii ajeechaa irratti yaalame san facebook irratti barreessuu malee waan godhe hin qabu. Kan gaafatamuu qabu halkan walakkaa namoota ajaja san dabarsanii dha. Ajajni suniis eessaa akka dhufee beekamaadha. Namoota 86 ajjeefamanif kan gaafatamu namoota yakka san raaw’atan qofa. Jawar bahaa nama naa ajjeessaa hin jenne. Gadi bahaa na deeggaraa illee hin jenne. Aangoo tursiifachuf jecha namoota kaabaa waliin Taayyeenis Jawar iratti duulaa jira malee dhugaa lafa jiru wallaalee miti.
Maarree kuni mirga. Eenyumtuu kan jaalate filachuuf mirga qaba. Garuu Jawar maalif akkas jedhe. Komaand postiin isa lammataa yeroo labsamuuf deemu Abiyyi paarlaamaati argamee mormuu dhiisee manatti hafe. Osoo argamee morme ilkaan TPLF keessa seenuu ta’a. Argamee deeggaruuf uummata Oromoo sodaate. Kanaaf manatti hafe. Kanatu ummata dallansiise. Abiyyi guyyaa tokkoon dura miseensoota paarlaamaa OPDO waamee komaand postii akka deeggaran itti himee ture. Kana innu hin beeka. Akkuma beeknu komaand postiin erga labsamee booda ijoollee Oromoo qaqqaalii meeqatu ajjeefame. Kana mormuun seeruma. Jawar dantaa uumataaf falma malee dantaa nama dhunfaaf miti. Kan Obbo Lammaa Magarsaa deeggarees firuummaa waan qabaniif miti. Nama dhugaa ta’uun isaa waan beekameefi. Inni amma hundaaf ifa ta’eera.
Wanti kun baayyee kan hafarfamtuu namoota kaabaatiini. Jawar kana kan jedheef jabina qeerroo fi qeerroon abdii uummataa ta’uu isaa ittin ibsuufi. Garuu kan inni akkas jedhe of faarsuuf osoo ta’e illee dhugaa tokko walitti himuun barbaachisaa dha. Osoo qabsoon qeerroo finiinuu baate, Abiyyi kan namni waa’ee isaa takkaa dhagahee hin beekine fulduratti hin bahu. Qabsoo qeerroo san tarsiimoo itti kaa’ee kan hogganaa ture Jawar malee Taayyee hin turre. Qabsoo san keessa osoo Lammaan gadi bahee “gooftaan keenya uummata keenya” jechuu baate OPDOn caccabdee kufuu malee carraa biraa hinqabdu turte. Takka Getaachaw Assaffaatu isin nyaata, ykn ummatatu gadi isin darba. Kana haaluun hin danda’amu. Taayyeenis Seyoum Teshome waliin hidhamee ture. Qooda walii kaa’un barbaachisaadha 🙂 Garuu hidhamate jechuun dhageetti qeerroo ganda takkaahu qabda jechuu miti. Haadhooftus kana liqimsi jedhaan. Jijiiramni erga dhufe Jawar ODPn deeggaramuu qabdi waan jedheef namoonni isatti dhiyaatan osoo hin haafiin OPDOti gale jedhani haadheefatan. Galata qabaachuu baattaniis Jawar kursii Abiyyi jala qabuun isaa waan haalamu miti.
Waan kanarrati baayyee jedhee of hin dadhabsu. Dhuguma gaaffiin isa guddaa uumata Oromoo fi Itoophiyaa siidaan moototaa nuuf haijaaramuudha? Kana qeequun akkamiti dinuummaa ta’a?
Jawar Oromoo fi uummatni biyyatti (uummata Amaaraa dabalatee) seenaa wal qooddatan hin qaban hin jenne. Kan inni jedhe uummanni Oromoo, Amaaraa fi sabaaf sablammooni hundi seenaa itti deebi’uu barbaadan (glorious past) hin qaban jedhe. Taayyeen jecha isaa kana osoo hin jallisiin seenaan akkasii jira jedhee falmuun mirga isaati. Waan hin jedhamne barreesuun kijibduu ta’uu dha. kijibuun fafa.
Kunis kijiba adii dha. Jawaar LTV irratti dhiyaate Abiyyi waan Itoophiyaaf Eertraa araarsee qofaaf osoo hin taane, waan wal dhibdee Sudaan keessa jiru fureef illee Noobeeliin argachuun isaa sirriidha jedhe. Isa qofa miti. In fact kan bara darbe ille isatu fudhachuu qaba ture jedhe. Dhugaan jirtu kana. Hundi keenya badhaasni keennamuun dura Abiyyi akka fudhatu hawwi ibsannee ture. Erga fudhatees gamachuu keenya ibsannerra. Kana jechuun Abiyyi kanaan booda hin qeeqamu jechuu miti.
Kun koottaa isinan gowwoomsa jechuu dha. Hin yaadattu taanaan miseensoota paarlaamaa lamatu gaaffii miidiyaa san gaafate. Miseensoonni kun lamaanuu naannoo Amaaraa bakka bu’anii dhufan. Yeroo san OMN cufsiisuuf olola hamaatu geggeefamaa ture. Deebiin Abiyyi’s eenyu irratti akka xiyyeefate beekamaadha. Kanaratti baayyee jechuun hin barbaachisu. Galgala san waan ta’ees ni beekna. Eegdoonni Jawar halkan qixxee ajaja eenyutiin osoo isatti hin himiin bahaa jedhaman? Dhugaan isin bira jira taanaan ajajni sun eessaa akka dhufe, eenyu eenyu akka itti hirmaate maalif ummaatatti hin himiin? Dhugaan isin waliin hinjirtu. Taayyeen halkan san eenyu maal akka xaxaa ture ragaan qaba jechaa hin turree? Malif ragaa gadi hinbaasin? Kijiba dhiisi jedhaan.
Jawar akka morkataa tokkootti dhiisiti akka aktivistii tokkooti illee ajandaa barbaade kaasee mootummaa qeequuf mirga guutuu qaba. Jawar qofa osoo hin taane paartileen biroos kanaan booda ajandaa uummata kana ilaalatu kaasun dura dubbiin kun jeequmsa kaasaa laata jedhanii akka sodaatan gochuu barbaaddi PPn. Jeequumsi kaanaan namoota jeequumsa kaasan deemaa gaafadhaa. Ajandaa hin kaasinaa jechuun waan kolfaati. Waayyee Lammaaf-Abiyyi torban darban biyyatu dubachaa bahe. Maalif waan kana dubbate jechuun ammo gowwummaa akkamiti? Lammaan hoo? Kan VOAti bahee dubbate ajandaa biraa waan qabuufi?
Jawar girriisa sitti eerguu dhiisi, deebii sii keennaa hin jiru. Yaaduma keetu yaada dadhabaa waan ta’eef ummanni si haarkaa kuffisaa jira.
የሰላም ኖቤል ሽልማቱን በብሔራዊ ሙዚዬም የማስቀመጥ ስነ-ስርአት ተካሄደ
በሰላም ሚኒስቴሯ ወ/ሮ ሙፈሪያት ካሚል ባለአደራነት፣ የኖቤል ሰላም ሎሬቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የተቀበሉት ዲፕሎማ እና ሜዳልያ ሦስት ቅጂዎች ለሕዝብ ይታዩ ዘንድ በአዲስ አበባ በሚገኙ ሦስት ስፍራዎች እንዲቀመጡ ተደርጓል፡፡
የሰላም ሚኒስቴር (ግንባታው ሲጠናቀቅ ወደ ሰላም ማዕከል) የሚዘዋወረው የኖቤል ሽልማት ለግዜው በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ በኢትዮጵያ ጥናት ተቋም እና ብሔራዊ ሙዚየም ተቀምጧል።